Tag: analytics varotra | Martech Zone
Tag: analytics momba ny varotra
Rehefa mamoaka ekipa mpivarotra ny orinasanao, ho hitanao fa lasa ilaina amin'ny alina ny fikatsahana atiny mahomby. Ekipa fampandrosoana ny orinasa mitady taratasy fotsy, fandinihana tranga, antontan-taratasy fonosana, topy maso momba ny vokatra sy serivisy… ary irian'izy ireo ampanjifaina amin'ny indostria, fahamatoran'ny mpanjifa ary ny haben'ny mpanjifa izany. Inona ny atao hoe Sales Enablement? Sales Enablement dia dingana stratejika amin'ny fampitaovana ireo orinasam-pivarotana amin'ny fitaovana, atiny ary fampahalalana mety hivarotra amin'ny fomba mahomby. Manome hery ny repoblika Sales izy io
Ny sary nentin-drazana an'ny mpivarotra mahomby dia olona iray miainga (angamba miaraka amin'ny Fedora sy kitapo), mitondra fitaovam-pitiavana, faharesen-dahatra ary finoana ny zavatra amidiny. Na dia mitana andraikitra amin'ny varotra aza ny maha-tia olona sy ny hatsaram-panahy amin'izao fotoana izao, dia nipoitra ny analytics ho toy ny fitaovana lehibe indrindra amin'ny boatin'ny ekipa mpivarotra rehetra. Ny data dia ivon'ny fizotry ny varotra maoderina. Ny fanaovana tombony betsaka amin'ny angon-drakitra dia midika fitrandrahana ireo fahitana marina